India: Dumarka quruxda u tartamaya maxaa isku wada ekaysiiyey! - BBC News Somali
Image caption Dumarka u tartamaya taajka quruxda India
Tartankani waa halkii ay ku soo shaac baxday xidigta jilayaasha Bollywook Priyanka Chopra, markaa la yaabis ma leh in hablaha iskugu soo hadhay wareega kama dambaysta ah ee tartanka boqoradda quruxda India ay sawirrada ku dhacaya u wada dhoolla cadaynayaan, sababtuna waxa weeyi waa tartan noloshooda wax weyn ka bedeli kara.
Laakiin inkasta oo ay ku naaloon doonaan guusha ay ka gaadhaan, hadana waxa ku soo baxday fadeexad ka dhalatay sawir la naashnaashay oo muujinaya sida ay sheegeen dadka dhaliilaya qabanqaabiyeyaashu oo ku tiraabeen in ay midabka cad u xaglinayaan.
India oo afar milyan ku dhawaad qof jinsiyadda ka xayuubinaysa
Sawirkaa la naashnaashay oo ay baahisay jariidada Times of India lagana qaaday kooxda qabanqaabisa tartanka sannadlaha ah ee quruxda India, ayaa muujinaya soddon kur oo laga qaaday dumar qurux badan.
Laakiin dadka adeegsada Twitter-ka ayaa sawirkaa aad isu weydaarsaday waxaanay ku ladheen suaal ah " Sawirkan maxaa ka si ah?".
Xuquuqda Sawirka @Naa_Cheese @Naa_Cheese
Timahooda sida fiican loo fidhay, dhalaalaya ee garabka gaadhay iyo midabka jidhkooda oo aad iskugu eeg, ayaa dadka qaarkood uba qaateen inay ay isku qof keliya yihiin. Kuwo kale ayaa si kaftan ah ugu jeesjeesay oo yidhi wuxuba waa qof keli ah.
Sawirkaas ayaa Twitter-ka aad loogu hadal hayey, waxaanay dadka dhaliilayey farta ku fiiqeen in aan haweenkaasi wax iin ah lahayne ay mashkiladdu tahay in aanay jirin kala duwanaansho midabka ah, taas oo mar kale muujinaysa sida reer India ugu mameen midabka cad.
Iyada oo sidaa baraha bulshada arinta loogu hadalhayaa isasa soo taraysa, ayaanu isku daynay in aan dadka tartanka qabanqaabinaya la xidhiidhno laakiin wax jawaab ah ilaa haatan kamaanu helin.
Tartannada quruxda tan iyo badhtamihii sagaashameeyadii waxay India ka ahaayeen arin aad loo hadal hayo. Waxaana ku guulaystay dhawr dumara oo caan ah sida Aishwarya Rai, Sushimita Sen iyo Chopra oo dhamaantood sidoo kale ku guulaystay abaal marinno caalami ah. Kuwo badan oo ka mid ah dumarka ku guulaysta ayaa sidoo kale shaqo lacag badan ka hela Bollywood.
Sannadihii u dambeeyey ayaa waxa dalka aad ugu batay xarumaha lagu tabobaro hablaha da'da yare ee danaynaya inay tartankaa ka qayb galaan.
Laakiin dumarka ku guulaystay kuwa ugu badnaa waxay ahaayeen dumar cadcad.
Image caption Waa markii Aishwarya Rai kuu guulaysatay taajka quruxda dunida 1994
Arintu wax lala yaabo maaha.
Jacaylka Hindida ee midabka cad weliba haweenku waa mid lagu yaqaan oo waxaabay kuwo badani u arkaan inuu yahay wax ay kaga sareeyaan kuwa ka madow.
Tusaale ahaan mudo dheer ayaa loo haystay in gabdhaha cadcad suuqooda guurku xaami yahay.
Tan iyo todobaatanaadkii markii kiriimka Fair and Lovely soo baxay, waxyaaba la isku caddeeyo ayaa noqday kuwa loogu iibisiga badanyahay. Sannadadahaas oo dhan ayaa jilayaasha caanka ah ee Bollywood oo lab iyo dheddig ba lihi xayeysiinayeen kiriimyadaa la isku caddeeyo.
Xayaysiisyada kiriimyada noocaas ah ayaa waxa dadka loogu sheegayey in aanay ku cadaanayn oo keli ahe ay xataa shaqo fiican, saaxiib ama guur ku helayaan.
Tartannada quruxda ee noocan oo kale ah ee sida u danaynaya midab gaara ayaa sii kordhinaya cuqdada laga qabo midabka madow.
Sannadkii 2005-tii ayaa shirkadaha qaarkood go'aansadeen in aan dumarka oo keli ahi u baahnayn in midab cad yeeshaane xataa raggu u baahanyihiin kiriimka Fair and Handsome oo ragga loogu talo galay. Waxa markii ba xayaysiiyey jilayaasha caanka ah ee Bollywood sida Shah Rukh Khan dabeetana waaba lagu daatay.
Sannadihii u dambeeyay waxa soo baxay ololaha Madowgu waa Qurux iyo #unfairandlovely oo su'aal geliyey midab jeclaysiga waxaanay ku baaqeen in xataa midabka madow loo bogo.
Dadka difaacaya kiriimyada la isku caddeeyaa waxay leeyihiin waa wax ku xidhan qofka dookhiisa, sida dumarku debnahooda u mariyaan xammuuradda cas oo kale, wax kale oo laga sii sheeg sheego kiriimyada la isku caddeeyaana ma jirto.
Waa macquul in suurto gal tahay dooddaasi, laakiin dadka ololaha kaga soo horjeeda ayaa sheegay in lagu mamo midabka cadi waxay muujinaysaa in la rumaysanyahay in midabkaasi ka sareeyo midabada kale, waxaanay sii xoojinaysaa cuqdadda iyo takoorka lagu hayo dadka midabka madow, waxaanay sidoo kale saamayn taban ku yeelanaysaa in ay shaqooyin sarsare helaan.
Waxa jira haween dharka xayeysiiya oo midabkoodu madow yahay waxaanay sheegaan in isha laga laliyo, waxaanan xasuustaa haweenka jilaaga ah ee soo maray Bollywood ee midabkoodu madawyahay in ay faro ku tiris yihiin
Sannadkii 2014-kii ayaa shirkadda xayeysiisyada India ee ASCI oo ah shirkad iyadu iskeed isku xakamaysaa soo saartay qawaaniin ay iskaga mamnuucday in ay baahisao xayeysiisyada dadka madow u muujinaya sidii oo ay yihiin kuwo "aan soo jiidasho lahayn, faraxsannayn, isku buuqsan oo walaacsan" waxaanay sheegtay in aanay doonayn dadkaasi lagu shaabadeeyo in aanay geyin " guur , shaqo iyo dallacsiin"
Hase yeeshee, xayeysiisyadaa weli waa la sameeyaa in kastoo ay ka yara maldahanyihiin kuwii waayadii hore. Jileyaasha filimada ee caanka ahina weli way taageersanyihiin arintaa.
Laakiin intaan qorayey maqaalkan ayaa war lagu diirsadaa soo baxay.
Haweenayda jilaaga ah ee Sai Pallavi oo gobolka koonfureed ee dalka ku dhalatay ayaa xaqiijisay in ay sannadkan horraantiisii diidday heshiis 20 milyan oo Ruppee ah oo ay ku xayaysiin lahayd kiriim la isku caddeeyo.
"Maxaan lacag aan xayeysiis noocaas ah ka helo ku falayaa? Baahi weyn uma qabo"
"Waxan odhan karaa xulashadeenna khaldan. Midabkan maarriinka ahi waa ka Hindida. Ma aha in aynu shisheeyaha u tagno oo waxay ku cadaadeen doonno"
"Cadaanku waa midabka jidhkooda inaguna mid inoo gaara ayaynu leenahay" ayaa laga sheegay in ay tidhi.
Hadalkaa Pallavi ayaa aad loo amaanayaa oo lagu diirsaday, waxaanay soo dhaweeyey dadka dhaliilayey sawirka la naashnaashay ee dumarka u tartamaya quruxda India laga qaadey ee dhamaantood isku wada eeg.